किन गर्छन आत्महत्या ? के हो यसको रोकथाम ? डा. गौतमले के भन्नुहुन्छ त ? हेर्नुहोस भिडियो - Seto Khabarकिन गर्छन आत्महत्या ? के हो यसको रोकथाम ? डा. गौतमले के भन्नुहुन्छ त ? हेर्नुहोस भिडियो - Seto Khabar
२२ श्रावण २०७६, बुधबार १६:४१
आत्महत्या भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले जानीजानी आफ्नो जीवन आफैले समाप्त पार्ने कार्यलाई बुझिन्छ। जसले आत्महत्याको प्रयास अथवा आत्महत्या नै गर्दछन्, त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत व्यक्तिलाई कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोग हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। त्यसमध्ये धेरैजसो व्यक्तिहरूमा आत्महत्याको कारण उदासीनता वा डिप्रेसन हुने गर्दछ। बाँकी ५ प्रतिशत व्यक्ति भने कहिलेकाहीँ एक्कासि तनावपूर्ण अवस्थामा पनि आत्महत्याको प्रयास गर्दछन्। यो मानसिक रोगले नभएर अचानक हुने घटनाक्रमसँग अथवा तनावसँग लड्न नसकेर हुने गर्दछ ।